Mbola mahazo vahana : « Azo hararaotina itadiavam-bola ny piraty » | NewsMada
Mbola mahazo vahana : « Azo hararaotina itadiavam-bola ny piraty »
Par Taratra sur 02/03/2016
Tsy voatery iadiana fa vao mainka azo hararaotina hitadiavam-bola sy ahitana tombony tsara ny piraty, izay mbola manjaka eto amintsika, araka ny fomba fijerin’ny mpandraharaha iray eo amin’ny tontolon’ny mozika. Ny DVD na rakitsary, hira sy sarimihetsika, no tian-kambara eto. Mitaky fiaraha-miasa matotra amina sehatra hafa anefa izany.
Toy ny efa mahazo vahana any ivelany any, tsy ilay hira ihany no amidy ao anatin’ny « clip » na sarimihetsika iray. Tsy vitsy ny mampiditra soratra maneho anaram-bokatra na « marques » na koa ilay zavatra vokarina orinasa, miara-miasa aminy, mihitsy. Tsy dokam-barotra miavaka be io, fa hita taratra amin’ny toerana nanodinana ilay « clip » fotsiny.
Araka izany, raha misy manao piraty io rakitsary io, hihamaro kokoa ny olona hahita sy ho voakasik’ilay zavatra atao dokam-barotra. Ao anatin’ny fifanarahana amin’ny orinasa tompon’ilay vokatra ny trano mpamokatra ilay mpanakanto no tokony hanamafy tsara ny fifanarahana ahazoan’izy ireo vola.
Hatreto, mbola vitsy ihany ny orinasa manao dokam-barotra « ankolaka » ao anatin’ireny « clip » ireny, eto amintsika. Indraindray aza, ilay mpanakanto sy ireo « figurants » na ireo miseho ao anatin’ny rakitsary indray no maneho maimaimpoana ny sary famantarana sy ny anaran’ilay vokatra.
Mikasika ny piraty, toa tsy hita mazava ny fahombiazan’ilay « hologramme » apetaka amin’ny tahirin-kira sy DVD tena izy na « original ». Iza no tsy mahita sy mahalala fa vao mivoaka ireny horonantsary sy « clip » ireny, ny ampitson’iny, efa mivelabelatra eny amoron-dalana eny koa ny piraty ?